मानसिक रोगको निवारण: अध्यात्म र विज्ञानको मिलन - Everest Talk
मानसिक रोगको निवारण: अध्यात्म र विज्ञानको मिलन1 min read
सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको बुझाइ नै रहेछ । बुझाई दुई कुराबाट प्राप्त हुँदा रहेछन्, एउटा शिक्षा र अर्को भोगाई । अरू अवस्थामा कुन माथि भनेर म भन्न सक्दिनँ तर रोगको बुझाई शिक्षाबाटै भएको जाती हो । भोगाई बहुत दुःखको कुरा हो ।
२०७६, ७ फाल्गुन बुधबार १०:४०
सुजन भट्टराई, कृष्ण ढुंगेल
हामीले मानसिक रोग, नेपालमा मानसिक रोगको स्थिति एवं मानसिक रोग निम्तिने विविध विषयका बारेमा एभरेष्ट टकमा प्रकाशित ’नेपालमा मानसिक रोगको भयावह अवस्थाः १०० मा ४० लाई डिप्रेसनमा चर्चा गर्यौँ । उक्त अंक हामीले विभिन्न मनोचिकित्सक, मानसिक अस्पतालका प्रतिनिधिहरू एवं मानसिक रोगबाट ग्रसितहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित भएर तयार पारेका थियौँ ।
यस अंकमा हामी मनोचिकित्सक एवं मानसिक रोगको समस्याबाट छुट्कारा पाएका तथा लडिरहेकाहरूसँगको कुराकानी तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीमा आधारित विवरण, मानसिक अवस्थालाई सधैँ स्वाथ्य राख्ने उपाय, मानसिक रोगको आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक निवारण, उपचार तथा समाधानका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।
मानसिक रोगसँगै उठ्ने चेतनाका कुराः
त्योबला ज्ञान थिएन, मानसिक रोगको सम्बन्धमा । भर्खर प्लस् टु सक्दै थिएँ, मलाई यसैयसै डर लाग्न थाल्यो । पेनिक भएको समयमा पाखुरा पोल्ने, रीस उठ्ने आदि हुनथाल्यो । जुन घट्नुको साटो झनझन् बढ्दै गयो ।
रूखहरू देख्दा पनि एकदम डर लाग्छ, सिलिङको रड देख्दा पनि मर्छु कि जस्तो हुने । न के भएको मलाई थाहा थियो, न त परिवारलाई । सुरुमा त फिजिसियनकामा गइयो । तर, मेरो समस्या उसको पहुँचको कुरा थिएन ।
अन्त्यमा थाहा भयो, मलाई त एन्जाइटी पो भएको रहेछ । मानसिक रोग विशेषज्ञसामु पुगेपछि पत्तो लाग्यो, औषधिहरूको प्रयोग सुरु भयो ।
मैले एन्जाइटीसँग लडेको ५ वर्ष भइसक्यो । तर अहिले पनि पूर्ण रूपमा निको भने भएको छैन । अरू सबै ठीक भए पनि अझै पनि आत्मविश्वासमा कमी र रिस बढी उठ्ने गर्छ । तर, मैले औषधि भने लिन छाडिसकेँ ।
मानसिक स्वास्थ्यको लागि आध्यात्मको प्रयोग पनि विशेष रहेछ । तर यसको प्रयोग जीवनमा ल्याउन सक्नुपर्यो । जस्तो कि आध्यात्ममा लाग्नु भनेको गेरु धारण गर्नु, रुद्राक्ष लाउनु होइन । बरु आफूले आफैँलाई अनुसासनमा राख्नुचाहिँ रहेछ । कम्तिमा एन्जाइटीसँग लडिरहँदा मैलेचाहिँ यही बुझेँ ।
त्यससँगै जोडिएको अर्को कुरा के भनेँ मैले माइण्ड फुलनेसको सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याएँ । अहिले पनि त्यसैलाई प्रयोग गरिरहन चेष्टा गर्छु । आखिर ओशो, बुद्धलगायत सबै अध्यात्मका महागुरुहरूले भनेको पनि यही हो– ‘परिस्थितिलाई स्वीकार गर ।’ यदी परिस्थितिलाई स्वीकार गर्न सक्ने हो भने हामीमा मानसिक तनाव ९० प्रतिशतले कम भएर जान्छ ।
हामी भन्छौँ नि, हाम्रो दिमाग , मेरो दिमाग । शरीरलाई कसले चलाउँछ त भन्दा दिमागले, अब दिमागलाई चलाउने पनि त केही हुन्छ ? हो त्योचाहिँ म हुँ । मैले विस्तारै बुझ्न थालेँ कि दिमागलाई चलाउने मैले हो । यदि दिमाग गलत बाटोमा छ भने त्यसलाई रोकेर सही बाटोमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसर्थ, दिमागभन्दा माथि आफू रहन सक्नु भनेको मानिसले मानसिक मात्र नभएर हरेक समस्याको समाधान भेट्नुजत्तिकै हो रहेछ । माइण्ड फुलनेसले पनि भन्ने कुरा यही हो ।
जब रोगले मलाई समायो, अनि मैले पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी किताब समाउन थालेको हुँ । भिडियो हेर्ने र आध्यात्मिक बाटो पनि समाउन थालेको हुँ । र, म चुकेको पनि त्यहीँ हो । यदि मैले स्कुलमा पढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोग सम्बन्धित सिर्फ एउटा पाठ मात्र भइदिएको भए पनि म दिमागको समस्या लिएर फिजिसिएनकोमा पुग्ने थिइनँ । यदि मेरो परिवारमा मानसिक रोगसम्बन्धी सामान्य जानकारी मात्र भएको भए पनि त्यस्तो परिस्थिति आउने थिएन । र, म एन्जाइटीको सिकार बन्नु नै नपर्ने थियो वा परे पनि सजिलै ठीक हुने थियो । यो अहिलेको मेरो अध्ययनले सिकाएको पाठ हो ।
मेरै परिवारको कुरा गर्छु । पछिल्लो समय ममीलाई पनि मानसिक रोगले समायो, सिजोफेनिया । सिजोफेनिया एन्जाइटीको ठीक उल्टो हुँदोरहेछ । आत्मविश्वास अत्याधिक, आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने । संसारभन्दा बाहिरका कुरालाई विश्वास गर्ने । कल्पनालाई वास्तविकता मान्ने । एक तरिकाले ममीमा भगवान उत्रिएको थियो ।
मलाई थाहा थियो, ममीलाई सिजोफेनिया भएको हो । तर मैले जान्दाजान्दै पनि परिवारलाई बुझाउन सहज भएन । मेरो यसप्रतिको शिक्षा पहिले त परिवारमै काम लागेन, सबैलाई बुझाउन ठूलो मेहनत र द्वन्दको सामना गर्नुपर्यो । भनेसी हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना कहाँ छ ? आफ्नै परिवारबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
डाक्टरहरूको त के कुरा, उनीहरूलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा बिरामी हेर्नुछ । ढोंगी आध्यात्मिक गुरु तथा मोटिभेसनल स्पिकरहरूको त कुरै छोडौँ । मानसिक रोगको बिरामीलाई औषधिले मात्र हुँदैन । चेतना पनि दिन सक्नुपर्छ । तर त्यो न डाक्टरले दिन्छन्, न त अध्यात्मिक शिक्षकहरूले नै । यसको मतलब के भने मानसिक रोगको उपचार औषधिभन्दा पनि शिक्षा हो, चेतना हो । मैले यही बुझेँ ।
(एन्जाइटीसँग विगत पाँच वर्षदेखि लडिरहेका बिरामीको भोगाई, बुझाई र अनुभव)
मानसिक रोग र मानसिक स्वास्थ्यः
जो कोहीले पनि प्रथमतः मानसिक रोग र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सामान्जस्यता जान्नु जरुरी छ ।
मानसिक रोग मानसिक स्वास्थ्य विकृत भएको अवस्था हो । मानसिक रोगको संक्रमणबाट बच्नुपूर्व नै मानसिक स्वाथ्यको स्थितिमा विशेष ध्यान पुर्याउने हो भने अपवादबाहेक कोही पनि ती रोगको सिकारबाट मुक्त हुने कुरामा मनोचिकित्सकहरूको जोड रहेको छ ।
पाटन मानसिक अस्पतालका वरिष्ट साइक्याट्रिक्स डा. अनन्त मानसिक स्वास्थ्यका विविध आयाम भएको र ती आयामसँग लड्ने एवं समन्वय गर्ने उपाय तथा विधिहरू पनि धेरै भएको जिकिर गर्छन् । अझ के–कति आयामहरू रोगका ती पक्षसँग पनि गाँसिएका हुन्छन, जसलाई उपचार गर्नका लागि सामान्य काउन्सिलिङ एवं परामर्श नै काफी हुन्छ र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने, योगा एवं ध्यान गर्ने लगायतका उपाय अपनाएर पनि व्यक्ति मानसिक रूपमा स्वाथ्य हुने कुरामा उनै डा. अनन्तको विश्वास छ ।
तर कुरा कहाँ पनि जोडिन्छ भने मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउँदा पुर्याउँदै पनि जेनेटिक एवं अन्य कारणले व्यक्तिलाई मानसिक रोगको संक्रमण लाग्नसक्छ ्र सबै मानसिक रोगहरू स्ट्रेससँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । बाइपोलार इफेक्टिभ डिसअर्डर, सिजोफेनिया लगायतका रोगहरू आफैँ पनि संक्रमण हुनसक्छन् ।
मानसिक रोगकै प्रसङ्ग केलाउँदै डा. विश्वबन्धु थापा लेख्छन, “हामी सुगर भयो, प्रेसर भयो त सजिलै भन्छौँ तर डिप्रेसन भयो भनेर सजिलै भन्न सक्दैनौँ ” हाम्रो समाजको सामान्य रूपरेखाले पनि हामीलाई धेरै असर पुर्याइराखेको हामी बुझ्न सक्छौँ ।
युवाको हकमा महत्वकांक्षाले जरो गाडेको कुरा हामीले अघिल्लो अंकमा पनि प्रस्तुत गर्यौँ । यसर्थ, मानसिक स्वास्थ्यको स्थितिलाई प्रगाढ बनाइराख्न युवाहरूले विशेषतः आफ्नो महत्वाकांक्षालाई कम गर्ने, धैर्यवान बन्न प्रयास गर्ने एवं जीवनको मेलोडीलाई सधैँ भौतिकतासँग मात्र नजोड्ने हो भने उनीहरूमा मानसिक रोगको यो भयावह अवस्था निर्मूल हुने कुरामा डा. अनन्तको जोड रहेको छ ।
आफ्ना सन्तानलाई प्री मच्युर रिलेसनसीपबाट टाढा राख्ने, उनीहरूका कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हरेक कुरामा समन्वय गर्ने हो भने टिनेजरहरूमा देखिने मानसिक समस्याको जरा नै मेटिन सक्ने मनोचिकिस्कहरू दाबी गर्छन् ।
हामीलाई समग्रमा हाम्रो वातावरणको कुराले पनि प्रभाव पारेको कुरामा मानसिक रोगसँग सम्बन्धित विविध अध्ययनले बताउने गरेका छन् । बेरोजगारी, गरिबी, असमानता आदिले पनि मानसिक रोगहरूलाई प्रश्रय दिएको कुरामा ती अध्ययनहरू स्पष्ट छन् । अतः देशका उक्त समस्याहरूको अन्त्य हुने वातावरण बन्नु पनि मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको सकारात्मक संवेदनशीलता हुनजान्छ ।
मानसिक रोग र अध्यात्मः
मानसिक रोगको निवारणका लागि मात्र नभएर मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि आध्यात्मिकबाटो महत्वपूर्ण रहन्छ ्र आध्यात्मिक संस्था आर्टअफ लिभिंगकी ऋतिका …….का अनुसार मानसिक स्वास्थ्यलाई सुदृढ बनाइराख्न निम्न प्रश्नहरूका उत्तरहरूबरे जानकार हुनु आवश्यक छ –
१. अध्यात्म र आध्यात्मिक विधिले व्यक्तिको मानसिक अवस्थालाई सुदृढ बनाइराख्ने हो कि मानसिक रोगबाट पनि मुक्त गराउने हो ?
२. मानसिक रोगहरूबाट संक्रमितहरूलाई कसरी समाधानको बाटोसम्म लगिन्छ ?
३. योग र ध्यानको भूमिका के छ ?
मानसिक रोग वंशाणुगत गुणका कारणले पनि हुन्छ विज्ञानले पनि भनेर सिद्ध गरिएको छ । तर, त्यो गुण सुरुवातमै थिएन । यसर्थ, वातावरणसँग घुलमिल हुँदैजाँदा विकशित भएका गुणहरूको कारणले त्यो सुरु हुनगयो । र, वंशाणुगत गुण हुँदै त्यस्ता समस्या रोगको रूपमा आफ्ना सन्तानमा सर्दैगए । यस्ता वंशाणुगत मानसिक रोगका पनि आध्यात्मिक समाधानहरू छन् ।
विविध साससँग सम्बन्धित टेक्निकहरूबारे बोल्दै उनै ऋतिका भन्छिन्( हाम्रा हरेक मानसिक क्रियाहरू हाम्रो साससँग निहित भैरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि हामी रिसाउँदा हाम्रो सास असन्तुलित भई ब्रिदिङ्ग स्पिड बढ्न जान्छ । त्यसकै विपरीत हामीले आफूलाई थकित महसुस हुँदा हाम्रो सास लामो हुने गर्छ । भन्नुको मतलव यो छ कि हामीले फेर्ने सासको गति पनि हाम्रो व्यवहारसँग सम्बन्ध राख्दछ । र, त्यही व्यवहारको निरन्तर अभ्यासले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वाथ्य वा अस्वाथ्य बनाउने भन्नेबारे यकिन गराउँछ ।
के पनि भनिन्छ भने प्राकृतिक रूपमै पनि कुकुरको सास छिटो चल्ने भएकाले उसको जीवनकाल छोटो भएको हो । यसमा नअल्झी अहिले यत्ति बुझौँ कि हामीले हाम्रो सासको गतिलाई सन्तुलित बनाउनु पनि मानसिक रूपमा स्वाथ्य भइराख्ने बलियो आधार हो । त्यसका लागि योग, प्राणायाम, ध्यान एवं मेडिटेसनका विविध टेक्निकहरूको निरन्तर अभ्यास गर्नसकिन्छ ।
समयक्रममा मेडिटेसनको वैज्ञानिक उपयोगिताबारे पनि अध्ययन भैसकेको छ । मेडिटेसनकै निरन्तर अभ्यासले मानिसको दिमागमा हुने हिप्पोक्याम्पस अर्थात नकारात्मक उर्जा एवं सोच उत्पादन गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ ।
डिप्रेसन, एन्जाईटी जस्ता मानसिक रोगहरू शरीरमा सकारात्मक उर्जाको अभावले प्रवाह भैरहेका हुन्छन् । मेडिटेसनले त्यो उर्जालाई बढाउँदै मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाइरहेको हुन्छ । यस्ता आध्यात्मिक अभ्यासले भेकस नर्भ (यस्तो नर्भ सेल जो हाम्रा अधिकांश अंगहरूसँग जोडिएको हुन्छ) लाई हरसमय स्वचालित बनाउँछ र शारीरिक एवं मानसिक रूपमा स्वाथ्य बनाउँछ ।
आध्यात्म र औषधि:
सबैभन्दा खुसीको पक्ष यो छ कि औषधी (ड्रग्स)को निरन्तरताले अपवादबाहेक यस्ता रोगहरू नियन्त्रणमा आउँछन् । तसर्थ पनि यिनको प्रयोग र फलोअपसँगै काउन्सिलिङ पनि निरन्तर रूपमा भैराख्नु प्रभावकारी हुन्छ ।
“धेरै बिरामीहरू पनि छन् जसले औषधी र आध्यात्मिक विधिलाई सामान्जस्य रूपले एकैपटक लगेर आध्यात्मिक विधिलाई निरन्तरता दिँदै ड्रग्सबाट मुक्ति पाएका छन् । आर्ट अफ लिभिंगकै रजत दाहाल भन्छन्– “हाम्रो मुख्य मिसन मानसिक रोगको दलदलबाट मुक्त हुनु हो भने उल्लेखित कुनै पनि विधिबाट समाधानका लागि आफ्नै बानी र संस्कारसँग लड्न सक्नुपर्छ । अझ अहिले त के कति आध्यात्मिक संस्थाहरूले साइक्याट्रिक्सको रिपोर्टका आधारमा पनि आध्यात्मिक विधिहरू अपनाउने गरेका छन् । औषधी प्रयोग गरिने चिकित्सा पद्धतिमा अझ आध्यात्मिक विधिको सामान्जस्यता मिल्ने हो भने मानसिक रोगको दीर्घकालिन समाधान पाउन सकिन्छ ।”
Tags: अध्यात्ममानसिक रोगविज्ञान